IIKHITSHI ZOMBALA WEKHITSHI WOWAMA-2019 - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhitshi zombala weKhitshi wowama-2019
Iikhitshi zombala weKhitshi wowama-2019
Nazi iindlela eziphezulu zekhitshi yembala ka-2019 nangaphaya.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe kunye neenkuni ziye zalawula imeko yoyilo ekhitshini kumashumi eminyaka adlulileyo. I-White, ithathwa njengombala ongaphumeleliyo kwikhabhathi yekhitshi, yaba sisiseko kuyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje ngenxa yesibheno esingapheliyo kunye namandla okuqaqambisa iindawo. Iikhabhathi zasekhitshini zomthi, kwelinye icala, yayizizinto eziqhelekileyo zesiko ngenxa yeembonakalo zazo zakudala kunye nobushushu bendalo abazisa kwiindawo. Nangona le mibala mibini yekhabethe lekhitshi inamandla ahlukileyo okuhlala, abanini khaya abaninzi bayatsaleleka kwiipelethi ezizodwa ezinceda ukudala uyilo olumangalisayo lwekhitshi ngokubanzi.
Imibala yemibala yasekhitshini iyahluka unyaka nonyaka ngenxa yendlela yokuqamba esetyenziselwa ukwenza iindawo. Eyona nto intle malunga noyilo lwekhitshi kunye nemibala yeephalethi kukuba ihlala ikhula kwaye inamandla. Sibonile uninzi lweendlela ezintle zekhitshi zekhitshi ngo-2018, ukusuka kwimibala eguqulweyo yomzingeli oluhlaza ukuya kwiithoni zomsebenzi ezipinki. Oluhlaza lomnquma lwenza uphawu lwalo ngelixa isinyithi esidityanisiweyo esenziwe ngobhedu, ubhedu kunye negolide ekhitshini ekhitshini.
Sijoyine njengoko sijonge phambili kwezona ndawo zishushu zemibala yasekhitshini ngo-2019. (Ndwendwela eyona galari yoyilo yethu Eyona mibala ipeyintiweyo yasekhitshini ukufumana ezinye izimvo)
Iingcamango zombala weKhabhinethi yeKhabhinethi
Uqikelelo lombala wombala we-2019 ucebisa uluhlu olwahlukeneyo lwemibala kwikhabhathi yekhitshi ebandakanya imibala emibini yeetoni, ukungathathi cala kwendalo okunje nge-greige, grey kunye ne-oki, iiplette ezilawulwa yimibala efudumeleyo yomhlaba onje ngeeorenji kunye neetoni ezinjenge-navy blue kunye neplum emnyama. Zimnkile iintsuku ikhabhathi yekhitshi ikumbala nje ongacacanga, kodwa endaweni yoko, lindela ukubona ukhetho lombala olungalindelekanga kwiiplette zekhitshi zangoku.
Apha ngezantsi singena kuphononongo olunzulu lwezinto ezizayo kunye nezizayo zekhabinethi yemibala yekhabhinethi yonyaka wama-2019 kwaye yintoni ebenza bongeze ngokutsha kwikhaya lakho:
Imibala emibini yeethoni - Indlela eqhelekileyo yokuyila izikimu zombala ekhitshini ibandakanya ii-hues ezimbini ezingafaniyo, apho iikhabhathi ezimnyama zidityaniswe ngee-countertops ezikhanyayo okanye iikhabhathi ezikhanyayo zidityaniswe neetafile ezimnyama. Nangona kunjalo, indlela efanayo yombala weetoni inokusetyenziswa ekukhetheni imibala kwiikhabhathi zekhitshi zibonelela ngokubonakalayo kunye nokwenza isibheno sayo.
Imibala emibini yeethoni sele iqalile ukuthabatha umphunga kulo nyaka kwaye izakuqhubeka nokuba yeyona ndlela ishushu yekhitshi yekhabinethi ngo-2019. Iqale ngesiqithi esichaseneyo, apho esi siqithi sipeyintwe ngombala owahlukileyo owahlukileyo kolunye ekhitshini ephambili ekhitshini. Ukuthatha lo mgaqo wombala uye kwiindawo eziphakamileyo, uninzi lweekhitshi kule mihla ludla ngokudibanisa imibala emibini kwiikhabhathi ezingaphezulu kunye neekhabhathi ezisisiseko. Ngokudibanisa imibala eyahlukileyo kwikhabhathi yekhitshi, ubunzulu kunye nobukhulu bongezwa kwisithuba.
Iphalethi yanamhlanje yeetoni ezimbini umbala wekhitshi yombala udibanisa ukungathathi hlangothi okuqinileyo kunye nomhlaba oqaqambileyo ophefumlelweyo. Le combo ye-stellar ngokuqinisekileyo iya kwenza nayiphi na ikhabhathi yekhitshi ibonakale. Olunye ukhetho lombala oshushu lwekhabhathi ezimbini zekhitshi zombala wekhitshi yimibala emnyama engathathi cala efana namalahle amnyama, abamnyama, ii-taupes zinokudityaniswa nemeko efudumeleyo yendalo enje nge-terra cotta, imifuno yesilumko okanye u-tyheli omthubi. Olunye udibaniso olunencasa lwekhabhathi zekhitshi ezimbini zetoniindibaniselwano enje ngwevu nohlaza, grey epholileyo kunye nefudumeleyo, iithowuni zemithi yendalo kunye nomnyama - nantoni na enokwenzeka ngalo mkhuba.
Imibala efudumeleyo yeGrey -Umbala ongwevu uthathwa njengongathathi cala kwimeko yoyilo lwangaphakathi. Abanini bamakhaya abaninzi kunye nabayili bayatsaleleka kumandla athuleyo aziswa zizimvi kwizithuba. Kule mihla siyibona eludongeni, phantsi, kwifenitshala, kwinto yokugqiba, kwizibane, kwimpahla ethambileyo nakwizinto ezihonjiswe ekhaya. Ngenye indlela, imibala efudumeleyo yegrey inokusetyenziswa njengesitetimenti sokwenza umbala kwikhabhinethi yala khitshi yanamhlanje.
Grey yeyona ndlela ifanelekileyo yabanini bamakhaya abafumana ukuba mhlophe kuyadika. Ikwabelana ngeempawu ezifanayo ezenza umbala omhlophe uthandwe kakuhle kwindawo yoyilo ekhitshini, njengoko ibonelela ngokungathathi hlangothi kodwa inethoni engaphantsi ngakumbi kunye nophawu ngakumbi kuyo. Iikhabhathi ezingwevu zekhitshi zibonelela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka ngokubhekisele ekuxubeni nasekuhambiseni izixhobo kwindawo yasekhitshini. Njengamakhabhathi amhlophe ekhitshini, lo mbala wemoody usebenza njengendawo yangasemva efanelekileyo yokwazisa ukutshiza kombala, nokuba kushushu okanye kupholile. Nangona ukukhanya okukhanyayo kwegrey kungaze kukhanyise ikhitshi ngendlela efanayo nekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini, abanye abenzi bepeyinti banikezela ngeethowuni ezipholileyo ezinje ngegrey grey enokuthi incede ukudala umoya ococekileyo ococekileyo, oqhelekileyo kunye nolungileyo.
Iikhabhathi ezingwevu zekhitshi zibonelela ngenkangeleko entle kwaye ephucukileyo yeekhikhini zangoku. Xa ubhangqiwe nge-quartz emhlophe okanye imiphezulu yeetafile ze-quartz ezimnyama, iikhabhathi ezingwevu zekhitshi zibonelela nge-canvass ethotyelweyo evumela ezinye izixhobo ekhitshini ukuba ziphume. Izisa ubuqaqawuli obumangalisayo kwindawo, ngaphandle kokuba ingoyiki kakhulu, ngelixa kwangaxeshanye yongeza ubunzulu kwisikimu sombala xa sisonke. Isitayile esiphakamileyo ngakumbi, iikhabhathi zasekhitshini ezingwevu ezifudumeleyo zilungelelaniswe kakuhle nezinto ezinokulinganisela ezinje ngehardware yentsimbi yekhitshi yentsimbi, izixhobo zombane ezingenazintsimbi okanye udonga olumhlophe olumhlophe.
Kukho imibala emininzi engwevu enokuphononongwa njengombala wekhitshi lekhitshi, kodwa ezo zishushu ngeli xesha lizayo zizithunzi ezingwevu eziphakathi ukuya esiphelweni esimnyama sobubanzi obufana negraphite, umsi ongwevu, uthuthu oluthuthu, amalahle, isileyiti ngwevu, ingqalutye kunye nentsimbi.
Inavy Blue -Umnyama oluhlaza okwesibhakabhaka okanye i-navy blue yeyona nto iphambili ekhitshini nakwibhafu. Uninzi lufumana i-navy blue ukuba ibe lukhetho olungalindelekanga ngombala xa kufikwa kwizinto zangaphakathi zasekhitshini, kuba ngokubanzi umbala oluhlaza okwesibhakabhaka uhlala unxulunyaniswa nesithintelo sokutya. Kodwa mva nje, i-navy blue ibisenza amaza xa kusenziwa umbala wekhabhathi yekhitshi.
Iikhabhathi zasekhitshini eziluhlaza okwesibhakabhaka zizisa ubukho obunemibala kwindawo. Inika indlela efanelekileyo yokwazisa umbala webala ekhitshini, ngaphandle kokuba ingoyiki kakhulu okanye ibe buthuntu. Iikhabhathi zasekhitshini eziluhlaza okwesibhakabhaka sombala ikwangumbala ofanelekileyo wabanini bamakhaya abangafuni ukuzibophelela kubunewunewu obuqaqambileyo, kodwa usafuna ukwenza iphalethi yombala ehlaziyiweyo. Ikhabhathi yasekhitshini eluhlaza okwesibhakabhaka nayo iyazola kodwa ime ngaphandle xa ibekwe kwindawo yokungathathi hlangothi.
Njengebhanti ethembekileyo yeebhulukhwe ezimnyama, iikhabhathi zasekhitshini zaselwandle zisebenza kakuhle nangasiphi na isitayile sasekhitshini okanye inkuthazo. Nangona lo mbala ungaguquki ngokungathathi hlangothi njengamhlophe okanye umbala ongwevu, iikhabhathi zasekhitshini eziluhlaza zisebenza kakuhle kwizikimu ezininzi zemibala, ngakumbi xa zilungelelaniswe nomthunzi wegrey. Nokuba yeyekhabinethi ephambili okanye yesiqithi esahlukileyo, ikhabhathi yasekhitshini eluhlaza okwesibhakabhaka ngokuqinisekileyo inokunikezela ngengxelo yodidi emakhitshini kwiminyaka ezayo.
Kukho nezinye iithoni zombala oluhlaza okwesibhakabhaka enokusetyenziselwa enye indlela yokwenza umbala wekhabhathi yekhitshi. I-Ocean eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nezinye ii-hues eziluhlaza zaselwandle zinokusetyenziselwa isibheno esisezantsi esinika intuthuzelo yaselunxwemeni kunye nemvakalelo yokuhlaziya.
Igraige -I-Greige yenye into engathathi hlangothi yanamhlanje eqhubeka nokufumana umhlaba njengombala wekhitshi ekhitshini. Ngeli xesha, mhlawumbi uvile ngayo kube kanye okanye kabini, kodwa yintoni kanye kanye eyi-greige kwaye yintoni eyenza ukuba kungathathi hlangothi kunyuko kuyilo lwekhitshi?
Ukubeka nje, i-greige yindibaniselwano yemibala engwevu kunye ne-beige. I-Beige yinto engathathi hlangothi ngokwesiko apho uninzi lwabantu luthatha njengokhetho olukhuselekileyo lombala kwikhabhathi yekhitshi. Imida phakathi kweendawo ezisesikweni nezingaqhelekanga, ine-vibe yokuphumla kwaye ayinzima ukuyisebenzisa xa kuziwa ekuxubeni nasekufaniseni. Ngwevu, kwelinye icala, ayithathi cala kule mihla eyaziwa kakhulu ngesibheno sayo esisezantsi, kodwa inokusetyenziselwa ukwenza iindawo ezinesitayile kunye nobunkunkqele. Zombini ezi ndawo zingathathi hlangothi zidumileyo zineempawu zazo ezintle kwaye zidityaniswa ukuze zivelise umbala omtsha zibonelela ngeyona mincili yomibini.
Ukudibanisa i-grey kunye ne-beige kudala i-hue etyebileyo ehambelana kakuhle nalo naluphi na uhlobo lombala. Amaxabiso emveli ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukusebenzisana nawo ngenxa yeetoni zangaphantsi ezityheli, kodwa ukongeza umbala ongwevu kwisiseko se-beige kusombulula ezi ziphantsi kwaye zinika amandla okulungelelanisa kakuhle nemibala epholileyo. I-Greige nayo iyabhetyebhetye njengoko inokuthi ilungelelaniswe kwiithoni ezahlukeneyo kunye namaxabiso.Isixa se-grey tint kumbala we-greige sinokuhlengahlengiswa kumanqanaba ahlukeneyo ukwenzela ukuba shushu okanye singathathi cala. Ukuthambeka okungakumbi kuyame ngwevu, kokukhona iba cala elipholileyo. Ngelixa amandla e-beige esomelela, i-greige iya ifudumala.
Iprojekthi yeekhabhi zeekhitshini ze-Greige ibhalansi efanelekileyo yokufudumeza nokuphola okuphantsi. Ukuba uyazithanda iikhabhathi zekhitshi ezingwevu, kodwa ungakhathazeki ukuba inokwenza ikhitshi lakho liziva libanda kakhulu, emva koko iigrayi zekhitshi yeyona ndlela ilungileyo onokuyihlola. Iikhabhathi zekhitshi ze-Greige zinika ubuhle obudibeneyo, ubuchule kunye namandla emibala engathathi hlangothi. Inikezela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka ngokubhekisele ekuxubeni nasekuhambiseni njengoko inokuhamba kakuhle ngemibala emininzi kunye nokugqitywa.
Njengoko sele kukhankanyiwe, ukugcwalisa iikhabhathi zegrey ekhitshini akunzima kangako. Kuxhomekeke kubungakanani betoni engwevu kwiikhabhathi zakho zekhitshi, imibala yentsingiselo kunye nokuhombisa ukuhlobisa kunokungeniswa kwisithuba. Iikhabhathi zekhitshi ze-Greige ezixhomekeke ngakumbi kwigrey zinokudityaniswa ne-hues ezipholileyo ezinje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe kwisikimu sombala ohlaziyayo wekhitshi. Ngelixa iikhabhathi zekhitshi ze-greige ezinama-beige angaphantsi kuzo zinokutshatiswa kunye neetafile ezimnyama okanye iinkuni ezimnyama ngokwahlukileyo. Iikhabhathi zekhitshi ze-Greige nazo zibhangqwe ngcono ngehardware yegolide yokuhombisa ngakumbi, ngelixa abo bafuna ukwazisa umbala odlamkileyo kwisithuba, dibanisa iikhabhathi zekhitshi ezinemibala eqaqambileyo emthubi.
Ukukhetha imibala yendalo efudumeleyo - Ukuba awuyithandi inkangeleko yemibala emitsha engathathi hlangothi ekhankanywe apha ngasentla, ke oku kulandelayo ngumbala wekhitshi ekhitshini yeyona ndlela unokukhetha kuyo.Iitoni zomhlaba kunye nemibala ephefumlelweyo yendalo zikwenyuka kunye nokuza okuza ngombala wekhitshi yekhabhinethi. Abantu abaninzi bayatsaleleka kumlinganiswa owahlukileyo ofaka imibala yendalo efudumeleyo izisa emajukujukwini, njengoko isenza ukuba sizive samkeleka ngakumbi kwaye simema.
isipho esivela kumama siye kwintombi ngomhla womtshato
Imibala eshushu iyaqhubeka nokuba lukhetho oludumileyo kumbala wekhitshi yasekhitshini kuba iyathuthuzela. Ukongeza ukukhaba ukuba banegalelo kwiipelethi zombala, ii-hues ezifudumeleyo zikwathathelwa ingqalelo njengezinto ezenza umdla wokutya.
Lindela ukubona iikhabhathi zekhitshi ngesibindi, imibala engaqhelekanga yemibala yendalo efudumeleyo elawulwa ziiorenji. Uhlobo oluphefumlelweyo lweetoni ezifudumeleyo zibandakanya ubhedu, igolide, i-henna, udongwe, ijinja, isardard, iapilkosi, iterracotta, yellows kunye nobomvu. Kuyilo oluqhelekileyo lwekhitshi, iikhabhathi zasekhitshini ezinemibala efudumeleyo zezona zibalaseleyo ngokugcotyiweyo.
Imibala emitsha yeBold -Sinokulindela uguquko oluhlaziyayo lwemibala kwiipelethi zethu zasekhitshini kule 2019 izayo, kwaye ngoku sithetha imibala emitsha, engalindelekanga eya kuthi ngokuqinisekileyo yenza iingxelo kwindawo yasekhitshini. Ukongeza umbala kwikhabhathi yekhitshi akuthethi ukuba yimibala eqaqambileyo. Kukho ii-hues ezifihlakeleyo kunye neethoni ezimangalisayo ezinokwenza uyilo lwekhabhathi lwekhitshi ngokulinganayo. Le mibala mitsha yesibindi sekhabhathi yekhitshi ibandakanya iplamu emnyama, ipetroli eluhlaza kunye neeorenji.
IPlum emnyama. Umbala omfusa ngomnye wemibala ethandwayo onokuyifumana kwikhabhathi yekhitshi. Kodwa ngonyaka we-2019, umbala omnyama weplum emnyama usetelwe ukuba ngukumkanikazi omtsha olawula umbala wekhitshi. Kule minyaka idlulileyo, iplamu emnyama ibisetyenziswa kuphela njengokuqaqamba kombala ekhitshini, esebenza njengokugxininisa kwizixhobo zasekhitshini, ukuhombisa, izixhobo kunye neebhodi zokutshiza. Nangona kunjalo, le hue enzulu inokusetyenziswa kwinqanaba elikhulu-kwikhabhathi yekhitshi ebandakanyiweyo
Umfusa, ngokubanzi, ucebisa ubukhosi kwaye ngenxa yezo zinto, iikhabhathi zekhitshi ezimnyama ezinokubangela ukuba zizityebi, zivakale kamnandi ekhitshini. Ngesitayile esimangalisayo, isibini esimnyama seplum ekhitshini yekhabinethi enemibala engwevu.
Ipetroli eluhlaza. Omnye umbala osetelwe ukwenza amaza ngonyaka we-2019 njengombala wekhabhathi yekhitshi luhlaza wepetroli. Alithandabuzeki elokuba eyona nto iphambili kulo nyaka uzayo kukufumana unxibelelwano nendalo. Kukhuthazwe ngendalo, izityalo kunye nemithi, ipetroli iikhabhathi eziluhlaza eziluhlaza zizisa imvakalelo yokuhlaziya ekhitshini. Eminye imibala eluhlaza esele iqala ukuya kwindawo ephambili zi-moss green, sage green kunye ne-hunter green.
Iinkuni ezipuliweyo -Ukugqitywa kweenkuni, nokuba kukhanya okanye kumnyama, yeyona nto iphambili kwindawo yoyilo ekhitshini, kwaye ukuza kuthi ga namhlanje basaqhubeka nokuba yeyona mibala ithandwayo kwikhabhathi yekhitshi ngenxa yobushushu bendalo, ubushushu kunye nokuziva ukuba bazisa endaweni.
Umthi ophawulwe ngomthi kunye nemithi yendalo iyabuya ngonyaka ozayo, kwaye ubuhle bazo obahlukileyo kunye nobushushu obufudumeleyo buthathwa buphakame ngokusetyenziswa kwezinye iindlela zale mihla ezinje ngee veneers kunye ne laminates. Izinto zangaphakathi nezangoku zangaphakathi zenza ukusetyenziswa okuninzi kwezinto zokwenziwa kunye nezinto ezenziweyo kodwa zibandakanya izinto zendalo ezinje ngomthi onzima okanye ii-veneers zokwenyani zikunceda ukuthintela ikhitshi ukuba lingakhange libonakale linyumba kakhulu.
Imithi ye-Oak, ngakumbi, iqala ukubuyela umzi-mveliso uyilo ekhitshini. Idume kakhulu ngexesha le-1970's kunye nasekuqaleni kwe-90's, i-oki yomthi wekhitshi lekhabhathi yaba luphawu lokutyikitya kwezitayile zekhitshi zemveli. Ngelo xesha, iikhabhathi zomthi we-oki ekhitshini kwiminyango yeepaneli eziphakanyisiweyo kunye namabala anemibala yobusi yayiyeyona nto iphambili kwikhitshi laseMelika. Kodwa ke ukunyuka kwemephu, icherry, ubungakanani obuphakathi be-fiberboard (MDF) kunye neenkuni zobunjineli kukhokelele ekunciphiseni kwayo. Kuba ukuhonjiswa kweediliya kusoloko kuthathelwa ingqalelo kwimeko yoyilo lwangaphakathi, uninzi lwabanini makhaya bathabathela ugqozi kwindlela yoyilo eyadlulayo kwaye bayilungelelanisa nokuseta okwangoku kunye nekhabhathi zekhitshi ze-oki ngumzekelo ogqibeleleyo wezinto ezinjalo.
Imibala efudumeleyo, yegolide kunye nomzekelo ococekileyo womthi we-Oak inegalelo elomeleleyo kwikhabhathi yekhitshi. Inikezela ngokuguquguqukayo njengoko isebenza ngcono kuninzi lweendlela zokuyila zasekhitshini nokuba ingaba zisezidolophini, zibuyisiwe okanye zorhwebo. Xa uxutywe neendawo ezipholisiweyo kunye nezinye izinto ezahlukileyo, iikhabhathi ze-oki zekhitshi zinokuzisa ubungakanani kwisithuba.
Ababoneleli, abavelisi bekhabhathi yekhitshi kunye nabaqulunqi bayaqhubeka nokwenza into entsha ngendlela ye-oki esetyenziselwa izitayile zekhabinethi yangoku. Izitayile zeminyango enomdla okanye iinkcukacha zoncedo zihlaziya ukubukeka kwayo, ngelixa ukugqitywa okutsha kunceda ukuvelisa olona phawu lwalo lubalaseleyo. Izithambisi ezinomtsalane ezinje nge-oki emhlophe emenyezelisiweyo okanye i-oki emenyezelwe ngebrazil nazo ziyintandokazi ekhulayo njengoko inika ukujija okungafaniyo nezinto zemveli kwaye ibanike i-vibe eyahlukileyo yanamhlanje.
Iimpawu zeMibala yoNxibelelwano lweKhitshi
Uyilo olulungeleleneyo luhoya nkqu neenkcukacha ezincinci kwisithuba. Kwaye ukwenza umanyano wombala wasekhitshini odibeneyo kodwa okhangayo, zonke izinto zoyilo kwisithuba kufuneka zikhethwe ngononophelo ngesandla. Izixhobo zasekhitshini zibaluleke ngokulinganayo njengekhabhathi zasekhitshini. Nangona ikhabinethi iyinto yokuqala oyiphawulayo xa ungena ekhitshini, izixhobo zombane zizalisa ukujonga kwayo konke.
Apha ngezantsi, siqokelele ezimbalwa zendlela ezishushu zekhitshi yesixhobo sekhitshi ukuba siyilinde ngo-2019.
Ukuhamba ngemitha yelanga kushushu
Imibala yeRetro -Izixhobo ezininzi zikwimhlophe esisiseko, isilivere okanye mnyama kwaye ngenxa yoku, uninzi lwabanini makhaya bazisa imibala ngokusetyenziswa kwezinye izinto ezigqityiweyo kunye nezixhobo kwindawo. Kodwa ngokuqhuba ukwenza umdla onomdla ngakumbi ekhitshini, abavelisi baphuhlise eyabo imigca yokutyikitya yezixhobo zasekhitshini ezinesibindi kunye neziqaqambileyo. Izixhobo zasekhitshini ziyindlela elungileyo yokuzisa ukutshiza kombala kwindawo njengoko yenza ingxelo ngaphandle kokongamela ikhabhathi yekhitshi.
Kunyaka ozayo, lindela ukubona izinto ezinombala odlamkileyo, ezinemibala eya kuthi ngokuqinisekileyo ivele kwindawo. Iifriji, amabanga kunye nee-oveni ezimnyama ezibomvu, imifuno ekalika, iiorenji ezishushu kunye namthubi anelanga asetelwe ukuthatha inqanaba leziko kuyilo lwekhitshi oluzayo.
Ifriji ebomvu ekhitshini - Jonga eWayfair
Kukwakhona nentengiso ekhulayo yezixhobo zasekhitshini ze-retro. Abavelisi abanjengoBig Chill, bavelisa iifriji ezinemibala eyahlukeneyo enje ngeBlue Blue, Pink Lemonade, Buttercup Yellow, Jadeite Green, Cherry Red, Black, White kunye neOrange. I-SMEG, olunye uhlobo lwezixhobo ezenziwa ekhitshini, ikwabonelela ngefriji yesitayile se-retro, ii-oveni, izitya zokuhlambela izitya kunye nezixhobo ezincinci ezinje ngomxube wokuma, iithowusta, iimixube kunye neeketile zombane. Umgca wabo wokuhlaziya umbala ubandakanya ipinki, i-pastel eluhlaza, i-pastel eluhlaza okwesibhakabhaka, i-panna, ebomvu, eluhlaza kunye neorenji. Uncedo lweKhitshi, oludume ngokuba ngumxube wokuma kwemibala, kunye nokwenza izixhobo zasekhitshini ngemibala eyahlukeneyo ebandakanya obomvu, iplamu enzulu, imfusa, luhlaza, iti eluhlaza okwesibhakabhaka, iorenji edlamkileyo, njl.
Uhlobo lwe-Retro lokuma simahla kuluhlu oluhlaza okwesibhakabhaka- Jonga eWayfair
Izixhobo zekhitshi ezinemibala e-Bold retro zibhangqiwe kunye nokugcwalisa iikhabhathi zekhitshi kwimibala engwevu ukuphakamisa umbala wazo, kodwa kungenjalo, zinokudityaniswa kunye nekhabhathi enombala okhanyayo nomnyama.
Uluhlu lwegesi nge-slate grey finish - Jonga eWayfair
Iithoni ezingwevu -Grey ayisiyombala oqhelekileyo wekhitshi yekhitshi kuphela, kodwa ikwabambe yomelele njengenye indlela yezixhobo zasekhitshini ezingenasici. Kanye nje ngeekhabhathi ezingwevu zekhitshi, izixhobo ezingwevu zisebenza kakuhle phantse ngayo nayiphi na into njengoko inikezela isigxina esizinzileyo nesingathathi cala kwisithuba.
Izixhobo ze-GE 'zikhuphe umgca wazo' Izixhobo zeSlate, eziyizixhobo zasekhitshini kwisiphelo esimnyama sesinyithi. Xa kuthelekiswa nokugqitywa kwesinyithi esingenasici, izixhobo zesilayidi zinembonakalo yematte kunye nomphezulu onganyangekiyo ngeminwe.
Eyona nto ilunge kakhulu kwizixhobo zasekhitshini ezingwevu kukuba inokudityaniswa nayo yonke imikhwa yemibala yekhabhinethi ekhishini ekhankanywe apha ngasentla.
Iindlela zekhitshini kunye nemibono ye2019
Hlaziya i-pairings classic -Nika into entsha yokuhamba ngambini weklasikhi, njengombala omnyama nomhlophe ngokudibanisa ngokudibanisa imibala emincinci ekhitshini. I-Pair charcoal grey ekhitshini yekhabhathi enefenitshala emhlophe emhlophe emva koko uyijike ngee-aksenti ezimibalabala usebenzisa umhombiso, ubugcisa, ukuthambisa okuthambileyo, unyango lwefestile, izinto ezikhanyayo okanye izixhobo.
Khanyisa ngokuhombisa -Gcina ikhabhathi ingathathi hlangothi kodwa yazisa umbala ongalindelekanga kwiziqithi, iibhentshi, iikhabhathi ukunika ubomi obungakumbi kunye nefuthe kwisithuba ngaphandle kokulawula kakhulu.
Yiya eclectic Abanye babanini bamakhaya banokufumanisa ukuba i-eclecticism iyingozi kakhulu, kodwa ukudityaniswa kwezinto, ukugqiba, iipateni, umbala kunye nezitayile kuvelisa ikhitshi eligcwele ubuntu. Njengoko besitsho, kutheni ukhetha isitayile esinye xa unokudibanisa inkuthazo eyahlukeneyo ukuyila uyilo lwekhitshi? Yazisa iphepha lodonga elinepateni kunye nokuprintwa kwejiyometri kwiindonga ezigxininisayo okanye ukudibanisa izinto zeklasikhi kunye nemibono yale mihla yokunyanzelisa i-eclecticism kwindawo yasekhitshini.
Ikhitshi elimhlophe lekhitshi elinesiqithi esiqaqambileyo esiluhlaza kunye nezitulo zebar ezimnyama - Jonga eWayfair
Ifenitshala emnyama -Umnyama kunye ngwevu iya kuhlala iyinto ethandwayo yemibala yefenitshala yasekhitshini ngo-2019. Yomibini imibala inokuma yodwa okanye inokudityaniswa nemibala yendabuko efana nemhlophe okanye ukugqitywa komthi ukuze kwenziwe ingxelo kwisithuba. Sebenzisa ifanitshala enemibala emnyama kwizitulo zebar okanye izitulo.
Iikhabhathi zekhitshi zangoku - Iindleko zokuLungiswa kweKhitshi - Isikhokelo soYilo lweKhitshi - Ukwahlula iikhabhathi zasekhitshini
izipho kutata ngosuku lomtshato
Iimpahla zangokuhlwa zasehlotyeni zomtshato
ikeyiki yomtshato imela iikeyiki
indlela ekhawulezayo yokutshata
imibala yelokhwe yomtshakazi
izimvo zangoku zomgangatho